Jamie Carragher Oo Saadaaliyey Tababaraha Mustaqbalka Ee
Halyeygii difaaca Liverpool ee Jamie Carragher ayaa saadaaliyey tababare khibrad iyo waayo aragnimo ba leh oo heersare ah oo mustaqbalka la wareegi doona Chelsea ama Arsenal.
Jamie Carragher oo hadlayay intii ay socotay ciyaartii ay xalay Liverpool 3-0 ku garaacday Leicester City, ayaa waxa uu amaan kula dul dhacay macallinkii hore ee Reds iyo Celtic ee Brendan Rodgers, haddana wata Leicester City, waxaanu sheegay inay u muuqato inuu kusoo jeedo magaalada London.
Tababarahan hore ee Celtic iyo Liverpool ayay kooxdiisa Leicester City ku dhowaatay inay usoo baxdo tartanka Champions League ee xili ciyaareedkan laakiin kulamadii ugu dambeeyey xili ciyaareedkii hore ee horyaalka Premier League ayaa guul-darrooyin ku dhaceen, waxaanay taasi u riixday kaalinta shanaad.
Laakiin xili ciyaareedkan ayay mar kale ku celiyeen bandhiggii fiicnaa waxaanay hayeen hoggaanka horyaalka muddo laba usbuuc ah ka hor intii aanay Liverpool xalay guul-darrada u xambaarinin.
Bandhiggan wanaagsan ayay Leicester City bilowday markii uu Rodgers loo magacaabay tababaraha xilli ay daalaa-dhacaysay, iyadoo uu markiiba helay qaaciidada guusha.
Jamie Carragher ayaa tababare Brenden Rodgers, waxa uu u saadaaliyey in wacdaraha uu muujinayo ay gaadhsiinayso inuu u wareego Chelsea ama Arsenal oo u baahan isaga, waxaanu yidhi: “Brendan Rodgers waa tababaraha British-ka ah ee ugu wanaagsan, shakina kuma jiro.
“Waxa laga yaabaa inaad ku doodi karto in shaqadiisii Liverpool ay waqti hore u timid laakiin wuxuu qabtay shaqo fiican, waxaanu noqday tababarihii ugu dhowaa inuu horyaalka ku guuleysto muddo 30 sannadood ah.
“Waa tababare heersare ah oo shaqo fiican ka qabtay Leicester, waxaanay ila tahay in shaqadiisa xigta ay noqon doonto Chelsea ama Arsenal.
“Waxa laga yaabaa inay ku adkaato inuu ku laabto Liverpool amaba uu tababare ka noqdo Manchester United iyadoo laga eegayo xidhiidhka uu la leeyahay Liverpool, laakiin waxaan qabaa inuu qaban doono shaqooyinka ugu sarreeya waddankan. Sidoo kale, waxa laga yaabaa xulka qaranka England inuu qabto.”